Tatitry ny Mpisera : Indray Andro Any, Hanana Zo Hahazo Fitsaràna Ve Ireo Ejiptiana Mpikatroka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2018 17:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Magyar, русский, polski, Italiano, Ελληνικά, English
Alaa sy ny vadiny, Manal Hassan. Sary an'i Lilian Wagdy tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
Ny Tatitry ny Mpisera ato amin'ny Global Voices dia manome anareo topimaso amin'ireo fanamby mila hihoarana, ireo fandresena azo ary ireo fironana mipongatra raha ny fahalalahana niomerika erantany no resahana.
Ny 19 Oktobra, nahemotry ny fitsarana faratampony ao Ejipta ho amin'ny 8 Novambra ny fitsaràna ilay bilaogera malaza sady mpikatroka, Alaa Abd El Fattah [fr]. Ilay raimpianakaviana sady vady, 36 taona, dia feo tena nanana ny lanjany tany anatin'ireo fihetsiketsehana tamin'ny 2011 nitondra ho amin'ny fionganan'ilay filoha taloha, Hosni Mubarak.
Amin'izao fotoana izao i Abd El Fattah dia manefa sazy dimy taona am-ponja noho ny tsy nanarahany ny lalàna ejiptiana mandrara ny fihetsiketseham-bahoaka tsy nahazoana alàlana mialoha avy amin'ny polisy. Efa nahavita taona telo sy tapany tamin'ny saziny izy. Tamin'ny fihainoana azy ny Alakamisy 26 Oktobra 2017, nialàn'ny mpitsara ny antontan-taratasiny ary naveriny hosahaninà sampana iray hafa. Fialàna bàla narosony ny hoe “manahirana” saingy tsy nasiany fanazavàna hafa.
Henjehina i Abd El Fattah noho izy nandray anjara taminà fihetsiketsehana iray niampanga ireo fitsaràna miaramila nanjo ny sivily tamin'ny Novambra 2013. Na marobe aza ireo olona nandray anjara tamin'ilay fihetsiketsehana no nosamborina, navotsotra daholo izy ireny taty aoriana, na nomena famotsorana heloka, afa-tsy i Abd El Fattah.
Anatinà raharaha iray hafa, mbola mety hahazo sazy fanampiny fampidirana am-ponja i Abd El Fattah satria nanevateva tamin'ny alàlan'ny bitsika iray ny rafi-pitsaràna ejiptiana noho ny tsy fanànan'ity farany fahaleovantena. Fiampangana azony noho ny fanehoankevitra iray nataony nandritra ilay fitsaràna iray niteraka resabe tamin'ny 2013 natao an'ireo mpiasa 43 avy aminà ONG iray nohelohina hiditra am-ponja rehefa voalaza fa meloka noho ny fanalàna baraka ny rafitry ny fitsaràna ejiptiana.
Tamin'ny 2016, ny Vondron'asan'ny Firenena Mikambana momba ny fiàinana am-ponja tsy an-drariny dia namintina hoe “tsy an-drariny” ny fitazonana an'i Alaa Abd El Fattah ary nahatsikaritra tsy fetezan-javatra marobe tamin'ny fitsaràna azy. Araka io vondrona io, “Atoa. Abd El Fattah dia tsy nahazo ny zony hahazo fitsaràna tsy mitanila sy manaja ny fitsipiky ny dingana iraisampirenena,”.
Hatramin'ilay fanonganana fanjakana notanterahan'ny tafika tao Ejipta tamin'ny 2013, izay namarana ny fitondran'ilay filoha voafidy Mohamed Morsi, sy nametraka ho eo amin'ny fahefana ny jeneraly Abdel Fattah al-Sisi, an'aliny maro ireo mpikatroka, mpanao gazety ary mpanao hetsi-panoherana no naiditra am-ponja. Manamafy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa 60.000 ireo gadra noho ny politika nohelohin'ny rafi-pitsaràna ejiptiana no mihiboka any am-ponja. Isan'ny fanitsakitsahana nataon'ilay rafitra ny fomba fitondra ratsy, ny fisamborana tsy misy didim-pitsaràna, ny fitazonana mandritra ny fotoana maharitra mandra-piandry ny fitsaràna, ny fitsaràna faobe ary ny fitomboana mampiahiahy ny fanamelohana ho faty.
Aminà raharaha iray hafa fantatra tsara ao Ejipta, nahemotra indray mandeha indray ny fitsaràna ilay mpakasary, Mahmoud Abu Zeid (fantatra amin'ny anarana hoe Shawkan). Shawkan, notànana vonjimaika efa ho dimy taona izao, dia hiseho eo anoloan'ny fitsaràna indray ny 24 Oktobra. Tamin'ny Aogositra 2013 izy no nosamborina, raha iny izy teo am-pakàna sary ireo olon'ny mpitandro ny filaminana ejiptiana nanao fanamparana hery tamin'ireo mpanao hetsipanoherana nanohitra ny fanesorana an'i Mohamed Morsi.
Amin'ny fotoana izay anaovan'ny governemanta ejiptiana toetra masiaka amin'ireo fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka, mihalalina hatrany ny tetikadiny ao anatin'ny tontolo niomerika mba hanarahana maso ny hetsik'ireo mpikatroka momba ny zon'olombelona sy ny demaokrasia. Hatramin'ireo hetsi-panoherana tamin'ny 2011, nipongatra ho hitan'ny rehetra ireo porofo mivaingana momba ny fampiasàna teknika fanarahana maso ataon'ireo olon'ny fitondràna ejiptiana hikendrena ireo mpikatroka.
Toa hoe nofoanan'ny governemanta alemàna ny fanofanana momba ny resaka fiarovana amin'ny heloka bevava atao amin'ny aterineto sy ireo votoaty mahery fihetsika, fanofanana tokony ho nomeny ny polisy ejiptiana. Araka ny nambaran'ny Associated Press, nandray io fanapahankevitra io ny governemanta alemàna noho ny tahony mety hampiasàna ny fahaizana natolony ho amin'ny fanarahana maso ny olompirenena tsy misy ifandraisany mihitsy aminà heloka bevava nomanina..
Manome endrika ratsy an'i Malezia, India ary Pakistàna ireo porofo vaovao milaza fisiana sivana atao amin'ny tranonkala
Araka ny voalazan'ny Software Freedom Law Centre manana ny foibey ao New Delhi, rohy maherin'ny 23.000 amin'izao fotoana izao no voasivana ao India. Vaovao azon'ity vondrona tsy miankina mpiaro sy mpanao fikarohana ity izy io, tamin'ny alàlan'ny fangatahana iray noho ny zo hahazo vaovao, natao tamin'ny Cyber Laws and E-Security Group eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny elektronika sy ny fampahalalambaovao.
Nandritra izany, ny kaomisiona misahana ny fifandraisana sy ny media marolafy (multimedia) ao Malezia (MCMC) dia nanao tatitra nandritra ny fihaonana iray natao ho an'ny daholobe tamin'ny herinandro lasa fa nobahanan'ireo mpanome tolotra fifandraisandavitra, niainga avy amin'ny fangatahana nataony, ny rohy niisa 5.044 hatramin'ny 2015. Araka io kaomisiona io, ny ankamaroan'ireo tranonkala ireo dia tranonkala vetaveta, maharikoriko na “mpikomy.”
Farany, ao Pakistàna, vondrona iray ahitàna mpikaroka miasa tsy miankina avy amin'ny ONG Islamabad Bytes for All sy ny Open Observatory for Network Interference no nanangona antontan-kevitra momba ny sivana natao taminà rohy maherin'ny 200 tamin'ny fampisàna lozisiely azy ireo manokana ho fanaovana andrana teknika. Raha naneho hevitra momba ny vokany, nanambara i Nighat Dad, tale mpanatanteraky ny LADigital Rights Foundation ary mpikambana ato amin'ny Global Voices :
Efa elaela ihany ny teknolojian'ny fanivànana no efa nisy teto Pakistàna ary heveriko fa tamin'ny 2011 na 2012, nisy tatitra iray momba ilay tetezana (passerelle) fifanakalozana aterineto tao Pakistàna, ary dia hain-dry zareo ny fomba atao hanivànana sy hibahanana tranonkala — nisy teo foana izy io. Tsy atao mahagaga raha rohy 210 no voabahana…. Azoko antoka fa raha anaovanareo andrana ireo rehetra azo idirana eto amin'ny firenena, tsy maintsy misy rohy an-jatony maro voabahana ao.
Skype voabahana ao Qatar
Nanamafy ny fisian'ny fibahanana azy ao Qatar ilay fampiasa ahafahana mandefa antso sy lahatsary, Skype, manana ny foibeny ao Etazonia. Nilaza ny tao amin'ny Microsoft fa “tsy dia afaka manao inona loatra manoloana an'io toedraharaha io ny Skype”. Doha News nitatitra hoe nanomboka nilaza tsy fetezan-javatra ireo mpampiasa izany tao Qatar rehefa nanandrana ireo tolotra mampiasa feo ampitaina amin'ny IP (VoIP) isan'izany ny WhatsApp, Skype, Viber sy Facetime, nanomboka tamin'ny volana Aogositra. Samy tsy nisy nanome fanazavana momba izay anton'ilay fampiatoana, na ireo mpandrindra na ireo roa mpanome tolotra fifandraisandavitra ao amin'ny firenena, Ooredoo et Vodafone.
Any amin'ny irenena hafa, bahanan'ireo mpandrindra ny tolotra mampiasa VoIP mba hanerena ny mpanjifa handoa saram-pifandraisana iraisampirenena any amin'ireo mpanome tolotra telefaona ao an-toerana, raha tokony hampiasa ireo tolotra toy ny Skype na WhatsApp, izay mandeha amin'ireo fotodrafitrasan'ny aterineto ary tsy miteraka na kely aza fandaniana amboniny ho an'ny mpanjifa.
Angon-drakitra Japoney momba ireo kabarim-pifidianana feno fankahalàna
Misy vondrona japoney iray fantatra amin'ny anarana hoe Ivontoerana fakàm-baovao momba ny fanavakavahana, tsy ela akory izay, nandefa ny tranonkala iray antsoina hoe “Ny angon-drakitra misy ireo kabary politika feno fankahalàna nandritry ireo fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 2017 “. Kendren'ilay tranonkala ny hitahiry ireo torohay sy fampahafantarana momba ireo fanambaràna ampolony mahery feno fankahalàna sy mpanavakavaka nataon'ireo politisiana isan-tsokajiny, amperinasa, mirotsaka indray hofidiana.
Ny Lanjan'ny hoe voamarina
Notaterin'ìireo Iraniana mpiaro zon'olombelona sy mpanao gazety ny fisedran'izy ireo olana rehefa mitady fanohanana amin'ireo orinasanà tambajitra sosialy rehefa misy sotasota sy filam-baniny manjo azy ireo, na fijirihana zakain-dry zareo eny anatin'ireo sehatra toy ny Facebook sy Twitter. Ny fahazoana sata voamarina dia mety hanome fiarovana fanampiny ho an'ireo mpampiasa manoloana ireo tatitra diso sy fitorohana votoaty iray ho politika, saingy nilaza tamin'i Simin Kargar, mpikaroka miasa ho an'ny Global Voices, ireo Iraniàna mpampiasa ilay tambajotra fa hoe sarotra ho azy ireo ny mahazo io sata io na dia efa nandefa izay antontan-taratasy ilaina aza ry zareo. Ankoatra izay, tsy misy torohay amin'ny teny farsi momba ireo dingana na taridàlana ho an'ny mpampiasa, raha resaka fomba fitorohana na fandraketana sotasota sy filam-baniny ao amin'ny Twitter, Facebook na Instagram.
Internet Censorship in Pakistan – Open Observatory of Network Interference
Building Trust: Towards a Legal Framework that Protects Personal Data in Lebanon – Social Media Exchange
Big Data from the South – Datactive
Misorata anarana handray ny Tatitry ny Mpisera ao amin'ny imailakao
Samy nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Mong Palatino ary Sarah Myers West .